ကိုပေါရဲ့ ပိတောက်ရိပ်၊ Ko Paw's Padauk-Yeik: အအားမနေတတ်သူပါ
အေးလေ၊ ဒီလောက်တောင် အချိန်ကုန် အားထုတ်ထားရတာ၊ သူတို့ပြောသလိုများ၊ တကယ်သာ ဒေါ်လာစားရမယ်ဆိုရင်၊ အနည်းဆုံး ဖရာရီလေးတစီးနဲ့ ငြိမ့်နေလောက်ရောပေါ့နော်၊ ခုတော့ အိမ်သာအိုးကြီးနဲ့ ဟင်း!!
ဒါကတော့ မမKOM ကို တည့်တည့်ရေးတဲ့ post လို့ပဲ ထင်တယ်။
ဟုတ်ပါ့။ ဒီလေးထောင့် ပုံးလေး ရှေ့မှာ ဘ၀တစ်ဝက်လောက် ကုန်မယ်လို့ ဘယ်လိုမှ ထင်မထားမိပါဘူးဗျာ။
တူတာတော်တော်များတယ် ကိုပေါရေး)
အားလုံးတော့ မဟုတ်ဘူးနော် ...
ဒါနဲ့ကိုပေါရဲ့ မြန်မာလိုမွေးနေ့ ကျော်သွားပီးမှ သတိရလို့ နောက်ကျဆုတောင်း လိုက်ပါတယ် ...
ဒါက ခဲတလုံးနဲ့ ငှက်အကုန် မာလကီးယားစေတဲ့ ပိုစ့်....:P
ကိုပေါရေးသမျှ ပို့စ်တွေထဲမှာ ဒီပို့စ်လောက် သဘောချင်း
လာလည်သွားကြတဲ့ ဘော်ဒါအပေါင်း ကျန်းမာရွှင်လန်းကြပါစေသတည်း။
မြန်မာပြည်ကြီး ထီးပျောက်နန်းပျောက် ဖြစ်ချင်တဲ့ အတိတ်နိမိတ်လားတော့မသိ။ ဒီကနေ့ အိမ်ကအထွက်မှာ မိုးရွာနေလို့ ယူသွားတဲ့ ထီးကောက်... ဒိုဘီဂေါက်က စားသောက်ဆိုင်မှာ မေ့ကျန် ကျပျောက်ခဲ့ပါတယ်။း-)
မွေးနေ့ကို သတိတရ ဆုတောင်းပေးဖော်ရတဲ့ မမေဓာဝီကို အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အသက်ကတော့ တနှစ်ကြီးသွားပြန်ပြီခင်ဗျ။ သံဝေဂအနေနဲ့ မနက်မနက် အိပ်ယာအထ ရေချိုးခန်းက မှန်ကြည့်တိုင်း မရဏက ကိုယ့်ခေါင်းပေါ်မှာ အလံဖြူ အလက် တစ်ထောင်လောက် လာစိုက်ထားတာကို တွေ့ရကြောင်းပါ။
ကျန်တာ အားလုံးက တူပြီးသား ဆိုတော့ ပြော ...
ပြောချင်ဘူး... ပြောကို ပြောတော့ဘူး။
နိးနိးချင်း မျက်နှာမသစ်သေးဘူး အိပ်ရာဘေးက ကွန်ပြူတာကို အရင်ဖွင့်တာ အကျင့်ကိုပါနေပြီ
မကြာခင် ကိုပေါကို အဒန်ပေါ ကပြစ်ထားခဲ့တော့မယ်ဗျ-
အင်တာနက်နဲ့ (i phone) rest room ထိုင်။
တူလိုက်လေ။ အိမ်သာနက်သာ မရှိရင် ဘာတွေ လုပ်နေမလဲ တစ်ခါတစ်လေ စဉ်းစားလို့ မရဘူး။ တစ်ခါတစ်လေ ကွန်ပြူတာပ်ိတ်ပြီး ဒီတိုင်းနေကြည့်တာ လူက လုပ်စရာတွေ သိပ်မရှိပဲ အားအားယားယားကြီး ဖြစ်နေသလိုပဲ။ ခက်ပါ့ ။
မြန်မာအချင်းချင်းပဲ အာကျယ်ရဲ. .. ဆဲရဲ.. မိုက်ရိုင်းရဲတဲ့ ဘုန်းကျော်တစ်ကောင် သူ့ဘလော့မှာ ကော်မန့်တောင် မဖွင့်ရဲတော့ဘူး။ အရင်ကော်မန့်တွေလဲ ဖျက်ပြစ်နေပြီ။ သူသိပ်ကြောက်တဲ့ ကော်မန့်မှာ သူ့လို မိုက်မိုက်ရိုင်းရိုင်းပြောတာလဲ မပါဘူး။ ဖတ်ကြည့်ပါဦး
စစ်သားလူထွက်ကြီးခမျာ . . ရွေးကောက်ပွဲက တစ်ပတ်ပဲလိုတော့ပေမယ့် . . . ရွေးကောက်ပွဲ ကိစ္စကို မပြောရဲရှာဘူး။ ရွေးကောက်ပွဲ ကိစ္စ ပြောလိုက်ရင် စစ်သားလူထွက်ကြီး သိပ်ကြောက်တဲ့ ကုလားကိစ္စပါလာမှာ မဟုတ်လား? ကုလားက ပြည်တွင်းမှာ ကြံ့ဖွတ်ကို အင်တိုက် အားတိုက် ထောက်ခံနေချိန်မှာ .. မြန်မာအချင်းချင်း စကားကြမ်းကြမ်းပြောတဲ့ လူဖြောင့်ကြီး ဘာအသံမှကို မထွက်ရဲရှာဘူး။ အေးကွာ။ နှစ်ပေါင်း ၂၂ ကျော်မှာ နအဖ လုပ်သမျှ စောက်တင်း စောက်ဖျင်းပြောခဲ့တဲ့ မင်းတို့တွေ… နအဖလဲ. . . ပလီဆရာတွေနဲ့ ပေါင်းသင်း လုပ်ကိုင်တော့မှပဲ အတင်းပြောခံနေရတာ လွတ်တော့တယ်။ မဆိုးပါဘူး။ နအဖ.. ကုလားနဲ့ အကျိုးပေးတယ်ပြောရမယ်။ ဟဲဟဲ
ခင်ဗျားတို့ကလည်းဗျာ .ခင်ဗျားတို့နဲ့ အတွေးအခေါ်အယူအဆ မတူတဲ့လူဆို န.အ.ဖ လူဆိုပြီး တံဆိပ်တပ်လိုက်ကြတော့တာဘဲ...အဲလို အစဉ်မချင် ပြောဆိုတာကလည်း ခင်ဗျားတို့ ပြောတဲ့ ဒီမိုကရေစီဘဲလားဗျာ...ဒါနဲ့ စကားမစပ်..ဒီဘလော့ http://liar-peoples.blogspot.com ကိုလည်း ဘယ်သူလုပ်တာလည်း ..န.အ.ဖ အဖွဲ့ကဘဲလား
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို စောက်တင်းတွေ ပြောဖို့က မင်းတို့အလုပ် မဟုတ်ဘူးဆိုတာလဲ စွဲစွဲမြဲမြဲမှတ်ထားပါ။ စစ်သားက စစ်သားအလုပ်မလုပ်လျှင် စစ်တပ်ရှိဖို့မလိုဟု ပြတ်သားစွာတွေးမြင်တဲီ့သခင်ကြီး Mr. ★ဆရာဇော်မျိုး★
I do appreciate on your open-minded nature and provide democracy practicing in your blog.
I dare say honestly, Zaw Myo,adouble cross man as phony patriot and his blunted words make ungraceful to your blog.
You could say to turn over his comments, for myself I don't want to read any comments after see him.
That is his goal and gain, Ma Nge Naing notice true fact and totally blocked him.
Seeing his name is disgraceful to your blog !
(I dare say honestly, Zaw Myo,adouble cross man as phony patriot and his blunted words make ungraceful to your blog.)
ဟင်.. နအဖနဲ့ ဒီမို ၂ ဖက်စလုံးက မှားနေတယ်လို့ ပြောလိုမရဘူးလား? တစ်ဖက်ဖက်ကို သူတော်ကောင်းလို့ ဖင်ပိတ်ပြောမှ အဆင့်အတန်းရှိတယ်လို့ သဘောထားတယ်ပေါ့? တော်တော်ရယ်ရတယ်။
ကျုပ်ကပါးစပ်နဲ့မပြောဘူး။ ခင်ဗျားတို့တွေ ဘယ်လောက် အဆင့်နိမ့်မလဲဆိုတာ သိအောင် . . . . အင်တာနက်ခေတ်မှာ နိုင်ငံတကာက Forum တွေကို သွားရောက်လေ့လာကြည့်ပါ။ ကျုပ်တို့ မြန်မာနိုင်ငံလို ကိုယ့်လူမျိုးအချင်းချင်း နအဖ-ဒီမိုဆိုပြီး ဘက်ခွဲပြီး ညိုးအတေးကြီးကြီးနဲ့ ရန်ဖြစ်နေတဲ့ ပြောဆိုတဲ့သူတွေ မရှိပါဘူး။ ကျုပ်တို့ မြန်မာတွေလို အရေမရ အဖတ်မရ တဖက်နဲ့ တဖက် ချေးယိုသေးပေါက်ကအစ အတင်းအဖျင်းပြောတာတွေလဲ မလုပ်ကြပါဘူး။ ကျုပ်တို့မြန်မာတွေလို ကိုယ့်မြန်မာအချင်းချင်း နှိပ်ကွပ် . . . . ပြစ်ဒဏ်ပေးပြီး . . . . အိမ်မှာခိုကပ်နေတဲ့ ကုလားကိုတော့ ကြောက်လို့ ဘာမှမပြောရဲတဲ့ လူမျိုးတွေလဲမရှိပါဘူး။ ခင်ဗျားတို့လုပ်ရပ်တွေကို စဉ်းစားပြီး မရှက်ကြဘူးလား?
မြန်မာတွေဟာ ဘွဲ့ရတွေ၊ ဘွဲ့မရတွေ . . . အနောက်ဖက်မှာနေတဲ့သူတွေ ၊ မြန်မာပြည်မှာနေတဲ့သူတွေ အမျုိးမျိုးကွဲပြားပေမယ့် အတွေးအခေါ်နဲ့ အမူအကျင့်တွေ ညံ့ဖျင်းပုံခြင်းအတူတူပါပဲ။ လိမ်လို့လွယ်တာလဲ အတူတူပါပဲ။ အကျင့်သီလတွေလဲ လုံးဝကိုမရှိပါဘူး။ မြန်မာဘလော့သမားတွေဟာလဲ ဘာအဆင့်အတန်းမှ မရှိပါဘူး။ ဦးပေါက သူ့ဘလော့ဂုဏ်ကို မြှင့်တင်ချင်ရင် နိုင်ငံတကာ အဆင့်မှီတဲ့ အပြုအမူကိုလုပ်တာက ပိုမှန်လိမ့်မယ်။ ခင်ဗျားတို့လို ကလေးကုလားပြောနေတဲ့သူတွေကို ဘန်းတာက ပိုမှန်မယ်ထင်တယ်။
တရေးနိုးမှ သတိရလာလို့ .. ခွင့်လာတောင်းတာပါ :-D
ကိုပေါရဲ့ “ပွဲသိမ်းတိုက်ပွဲကို စောင့်နေတာ” ဆိုတဲ့ ကာတွန်းလေးကြိုက်လို့ ကျနော့်ဘလော့မှာ credit ပေးပြီး သုံးထားပါတယ်။ မကြိုက်ရင်၊ ခွင့်မပြုရင်တော့ ပြန်ဖျက်ပေးပါမယ်။
မန်းကိုကို.... သုံးပါ။ ကြိုက်တယ်ဆိုလို့ ဝမ်းသာပါတယ်။